MPPG Tutorials & Tools Archives - MPPG
Home / MPPG Tutorials & Tools
Sony Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်း
Google Sharing July 21, 2016	MPPG Tutorials & Tools
မသိသေးတဲ့ လူများအတွက်ပါ အရင်ဆုံးအနေဖြင့် အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ရောက်ပေးပါ http://developer.sonymobile.com/unlockbootloader/ ယခုမိမိပြုလုပ်မည့် Model ရွေးပေးပါ ကျွန်တော်ကတော့ XperiaZ ပါ ပြီးရင် Continue ကိုနှိပ်ပေးပါ နောက်တဆင့်မှာ မိမိ Gmail ကိုထည့်ပါ Submit ကိုနှိပ်ပါ အဲ့နောက် စောနက မိမိထည့်လိုက်တဲ့ Gmail ထဲသို့ Sony က ပို့လိုက်တဲ့ Mail တစ်ခုရောက်လာပါမည် ဆက်လက်ဝင်ပေးပါ Click Here To Proceed ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါ နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ကနေရာရောက်ပါမည် ပထမ တစ်ကွက်မှာ IMEI ရိုက်ထည့်ပါ ပါဝါတတ်နေတဲံအလုံးဆို *#06# နဲ့ စစ်လိုရပါတယ် Logo လည်နေတဲ့အလုံးတွေဆို …
Google Sharing July 16, 2016	MPPG Tutorials & Tools
အခုပြောပြမှာက နောက်ဖုန်းခွာပြီးရေးရမဲ့ပုံစံပါ Test Point ထောက်ပြီး Qualcomm 9008 Mode ကနေရေးရမှာပါ 9008 ၀င်ဖို့အောက်က ကြိုးလေးလိုတယ်ဗျ မရှိရင် TestPoit အသုံးပြုပြီးရေးနိုင်ပါတယ် အဖုန်းခွာပါ ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း စာဂနာလေးနောက်ထောက်ပြီးပါ ပြီးရင် Computer နဲချိတ် Qualcomm 9008 Mode သိပြီဆိုရင် စရေးလို့၇ပါပြီ အ၇င်ဆုံး သူကိုရေးဖို့က Tool Studio ကအကောင်းဆုံးဘဲဗျ ကျွန်တော်တော်တေ်ာများများရေးဘူးတယ် အဆင်မပြေဘူး အရင်ဆုံး Tool ဒေင်းလော့ဆွဲပါ Download Here Tool Studio ကိုဖွင့် EMMC Downloader ကိုသွား SCAN နှိပ် ပါ Port …
Samsung Firmware Download No Need Account – 100% Resume
Google Sharing July 14, 2016	MPPG Tutorials & Tools
အရင်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ Model number ရိုက်ထည့်ပါ ဒီလင့်ကနေ ၀င်ဒေါင်းပါ ပြီးရင် မိမိလိုချင်တဲ့ Region ကိုရှာပါ ပြီးရင် အ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Download ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ ကယ်ဒေါင်းပါပြီ
Ooredoo ZTE Smart 10 FRP Lock (Sitt Yan Naing ‘Myaung’)
Sitt Yan Naing Myaung May 9, 2016	MPPG Tutorials & Tools
လွယ်ကူရိုးရှင်းသွားအောင် ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် 1. 2. skip ကို နှိပ်ပါ။ 3. WIFI နှင့် connect လုပ်ပေးပါ။ 4. Gmail account တောင်းတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ ချိတ်ထားတဲ့ Wifi ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ 5. Space bar ကိုကြာကြာဖိထားပြီးလွှတ်လိုက်ပါ။ 6. Massage box တစ်ခုတက်လာရင် Ok ကိုနှိပ်ပါ။ 7. Wifi setting ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်။ Menu ကိုနှိပ်ပါ။ 8. Advanced ကိုနှိပ်ပါ။ 9. Advanced Wifi setting ထဲက Search box မှာ Keyboard လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။ Keyboard & Input Methods …
eMMC Backup and Restore from ADB Command [ Tutorial 1 ]
Phyo Nyi Nyi March 3, 2016	MPPG Tutorials & Tools, Slider
eMMC file ကို root လုပ်ပြီးသား ဖုန်းတွေကနေ backup ယူလို့ရပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ 4GB ထက်မပိုတဲ့ eMMC file တွေကို အလွယ်တကူပဲ adb shell command အသုံးပြုပြီး backup ယူလို့ရပါတယ်။ eMMC file ကို adb ကနေ backup ယူ adb ကနေပဲ restore လုပ်၊ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၉၆ပါး ရောဂါ အားလုံးနီးပါးပျောက်ကင်းပါတယ်။ Huawei U8825D ဖုန်းတွေ ပေါ်ကာစ ကတည်းက ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး Software ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာပေါင်း မြောက်မြားစွာကို အလွယ်တစ်ကူ ဖြေရှင်းလို့ ရခဲ့ပါတယ်။ …
Phyo Nyi Nyi February 26, 2016	MPPG Tutorials & Tools, Slider
ယခင် ဘားရှင်းမှာ Cleaning Virus မှာ ကြာနေတဲ့ ပြဿနာ ကို ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။ Virus Packages အသစ်တွေ ထပ်တိုးပေးထားပါတယ်။ Firmware မကျအောင်- Wifi မျပျက်အောင် သေချာစီစဉ်ပေးထားပါတယ် Download Here: Ghost Push Killer PRO v 2.3 1. ယခု Application ကို Window OS ပေါ်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ 2. အသုံးပြုမည့် Window PC တွင် Miscrosoft Dot Net Framework 4.5 Install ပြုလုပ်ထားရမည်။ Microsoft .NET Framework 4.5 …
Phyo Nyi Nyi February 24, 2016	MPPG Tutorials & Tools
မိမိဖုန်းတွင် VIrus ကိုက်မကိုက် သိနိုင်သည့်အကြောင်းများ ———————————————————- – WiFi, Mobile Data Auto ပွင့်နေခြင်း။ – Software များ Auto Download ဆွဲခြင်း/ Auto Install လုပ်ခြင်း – အသုံးပြုရ အဆင်မပြေရလောက် ဖုန်းလေးလံခြင်း/ ဟန်းခြင်း။ – မကြာခဏ restart ကျခြင်း – အလွန်အမင်း Battery အကုန်မြန်ခြင်း – ဖုန်းတွင် Force Close, Has Stopped စသည့် Error Box များ တက်ခြင်း စသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPPG …
Phyo Nyi Nyi February 23, 2016	MPPG Tutorials & Tools
Huawei G610-U00 Google Apps [ MPPG ]
Phyo Nyi Nyi February 19, 2016	MPPG Tutorials & Tools
Download Ghost Push Killer PRO V2.1